ဘုန်းကြီး တွေ မဟုတ် မတရား တာလုပ်လို့ဘာသာပေါင်းစုံ က ဝေဖန်ရင် အတု ဆိုတဲ့ စကားလုးံ သုးံပြီး အကာအကွယ်ယူလိုက်တယ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Bill Clinton: Violence in Myanmar sickens world
MYANMAR’S BUDDHIST MONKS INSULT ISLAM WHILE DEMONSTRATING AGAINST THE VISIT OF OIC DELEGATES »
ဘုန်းကြီး တွေ မဟုတ် မတရား တာလုပ်လို့ဘာသာပေါင်းစုံ က ဝေဖန်ရင် အတု ဆိုတဲ့ စကားလုးံ သုးံပြီး အကာအကွယ်ယူလိုက်တယ်
အတု နဲ့ အစစ်
မင်းတို့ ဟာ ကလည်း ဒီလို ရိုင်းစိုင်း ယုတ်မာ ပြီး သောက်ရှက်မရှိ သူများ ဘာသာ တရားကို စော်ကား နေတဲ့ ဘုန်းကြီး တွေကို ဝေဖန်ရှုပ်ချ လာတော့ ဘုန်းကြီး အတု တွေပါ ဆိုပဲ။ ဘုန်းကြီး အစစ်က ဘယ်ဟာ တုန်း ပြောစမ်းပါအုးံ။ ဘုန်းကြီး တွေ မဟုတ် မတရား တာလုပ်လို့ဘာသာပေါင်းစုံ က ဝေဖန်ရင် အတု ဆိုတဲ့ စကားလုးံ သုးံပြီး အကာအကွယ်ယူလိုက်တယ်။မဟုတ်တာ လုပ်နေတာ မမိ မချင်းတော့ ဘုန်းကြီး အစစ်ပဲ။
နောက်တခုက ကုလား က ကိုယ့်အသက် ကိုယ် ကာကွယ်ခုခံလို့ ကတုးံ သေသွား ရင် အဲဒါ ဘုန်းကြီးအစစ် လို့စောက် အစိုးရ ကအစစောက်ပြည်သူ အဆုးံ တညီတညွတ်တည်း ထအော်တယ်။ ကုလား က သတ်လိုက်ရင် ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ဘုန်းကြီး အစစ်။
မင်းတို့ ဟာ က ရှိသမျှ ဘုရားသားတော် အားလုးံ နီးပါး လောက် ပျက်ဆီး ပြီး စိတ်ဓာတ်က အစ အဝီစိ ထိုးဆင်းနေတာ ကို ဖုးံကွယ် ဖို့ ကြိုးစား မနေနဲ့ ။ အဲလို ဘုန်းကြီးတွေ ပျက်ဆီး ကုန်အောင် ဗမာ အစိုးရ ကပဲ ဖန်တီး ခဲ့တာ။ အခုပဲ ကြည့်လိုက်။ ဘယ်လောက် ပဲ ရိုင်းစိုင်း တဲ့ စကားလုးံ သုးံ သုးံ ဗမာသိန်းစိန် အစိုးရ ခွင့်ပြု ထားတယ်။ အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က ရိုင်းခိုင်းထားတာလေ။
အေး အစိုးရ ကိုတော့ ပြန် မရိုင်းလေနဲ့ ။ ကတုးံတွေ ကိုကြိုးနဲ့ ပါ တုတ်ပြီး ဝိုင်းကန် ကြတာလား။ ပစ်သတ်လိုက်တာ ရစရာမရှိဘူး။ အစိုးရ စီမံ သလို သွား နေရတဲ့ ဘုရားသားတော် တွေ အနေနဲ့ သိန်းစိန် တို့ ကိုပဲ ဘုရား အဖြစ် သတ်မှတ်သင့်တာပေါ့။ မဟုတ်လည်း ရှင်ဂေါတမ ရဲ့ အဆုးံ အမ ကို လိုက်နာတာမှ မဟုတ်တာ။ အစိုးရ ရဲ့ အဆုးံ အမ ကို လိုက်နာ နေရတာ မဟုတ်ဘူးလား။ မြန်မာတနိုင်ငံ လုးံ ဘယ်နေရာ ကြည့်ကြည့် မဟုတ် မတရား တာတွေချည်းပဲ။ ဘုန်းကြီးတွေက အစ ရိုင်းစိုင်း နေကြတာ။ ဒါကိုများ ထေရဝါဒ အထွန်းကားဆုးံနိုင်ငံ ဆိုပဲ။ ထေရဝါဒ ထွန်းကား ရင် ဘုန်းကြီးက အစ လူသတ် မုဒိမ်းကျင့် အကြမ်းဖက်တရားဟော ။လုယက် ။သူများဘာသာ ကို စော်ကားရိုင်းစိုင်း ရတယ် ပေါ့ ဟုတ်လား။ ဒီ အမူအကျင့် တွေကို ကမ္ဘာ မှာ ဗုဒ္ဓဝါဒ သာ အကောင်းဆုးံ လို့ ကြွေးကျော် ပြီး ဖြန့် အုးံ မတဲ့။ အစိုးရ က အစ ဒိဌိ တွေ။
This entry was posted on November 16, 2013 at 3:02 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
5 Responses to “ဘုန်းကြီး တွေ မဟုတ် မတရား တာလုပ်လို့ဘာသာပေါင်းစုံ က ဝေဖန်ရင် အတု ဆိုတဲ့ စကားလုးံ သုးံပြီး အကာအကွယ်ယူလိုက်တယ်”
November 16, 2013 at 3:03 am | Reply
ကျွန်တော် ထိုင်းမှာနေတာ ထိုင်းကလူတွေလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဘဲ..ထိုင်းက ဘုန်းကြီးတွေလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းကြီးတွေဘဲ ..”ဒါပေမဲ့ ထိုင်းတွေ မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အခုအခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ရွံကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သတင်းဌါနတစ်ခု နဲ့ တစ်နေရာကိုသွားတယ်
အဲဒီမှာ ထိုင်းတွေကပြောတယ် ဒီလူတွေမှာအကြင်နာတရားဆိုတာ မရှိဘူးလား မသိဘူးတဲ့.. ဒီကို ရောက်နေတဲ့ သူတွေကို ကျွန်တော်တွေ့ရတာ ဘယ်လောက် သနားစရာကောင်းလဲတဲ့..ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဆီ မအပ်ပေးချင်လို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုဘဲ အပ်ပေးပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခတွေကလည်း ဒါကို ကျေနပ်ကြပါတယ်တဲ့။”
ထိုင်းမှာ ထိုင်းတွေ စကားပြောတာတောင် အရမ်းယဉ်ကျေးတယ်..လူကို လူလိုဆက်ဆံတယ် ဒီက ထိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးတွေကို ကြည့်တာနဲ့ မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘန်းကြီးတွေကို ကြည့်ရတာ “အိမ်သာတွင်းထဲက ရေနဲ့ မိုးရေလို “ကွာတယ်ဗျာ..ထိုင်းတွေ အရမ်းယဉ်ကျေးတယ်..စကားတောင် ကျယ်ကျယ်မပြောဘူး..စကားကျယ်ကျယ်မပြောတာကိုက သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုဘဲ .. ကျောင်းတစ်ခုခုမှာ တက်ကြတယ်ဆိုရင် ထိုင်းတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို အရင်လေ့လာရတယ်။
“”ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်း ဘာလို့ အိမ်သာတွင်းက ရေနဲ့ မိုးရေလိုကွာနေလဲ မသိဘူး..ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ မြန်မာပြည်က ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ သင်္ဃန်းတွေ ချီးစော်နံနေလိမ့်မယ်..ကျွန်တော် ဘာသာတရားကို တခါမှ မစော်ကားဖူးဘူး..ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ နဲနဲလေး စော်ကားခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်တော် ပြောနေတာ လူထောင်သောင်းရှိတဲ့ လူအုပ်ကြီးကြားမှာ ဗီနိုင်းအကြီးကြီး ကိုင်ကာ စော်ကားနေတာမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့် face book ပေါ်မှာ ကိုယ်ရေးတာပါ။ အချိန်တန်ရင် ပို့စ်ကို ဖျက်ပေးပါ့မယ်။””
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော် ရေးချင်တာက ဆီနဲ့ ရေလို ကွာခြားသလို ကွာခြားတယ် ဆိုပြီး ရေးချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခု မြန်မာပြည်က ဘုန်းကြီးတွေ ဆီ နဲ့ ရေ လိုနှိုင်းရလောက်အောင်ကို အဆင့်မရှိလို့ အိမ်သာတွင်းထဲကရေ နဲ့ မိုးရေ ကို နှိုင်းပြတာပါ။
တိရိစ္ဆာန် ဝါဒ လို့အစ္စလာမ် ကို ဘုရား သားတော် တွေက ရှုပ်ချ လိုက်တော့ တကယ် တိရိစ္ဆာန် ဖြစ်သွား တာက ဗီနှိုင်းကြီး ကိုင်ပြီး လမ်းလျှောက်ပြနေတဲ့ ဘုရား သားတော် တွေဗျ။
တကယ်ပါပဲ။ ငါ့ စကား နွား ရ ” ပြောလိုက် ရလို့တခြား တဖက်သား က တမတ်ဖိုး ထိခိုက်သွား ရင် ကိုယ်က နှစ်ဆယ့်ငါးကျပ် ဖိုးလောက်ထိခိုက် သွားမှာပဲ။
ကိုယ့် အဆင့် ကို ကိုယ် ဖော်တဲ့ အလုပ်တွေ သိပ်မလုပ် ကြပါနဲ့ လားဗျာ။
November 16, 2013 at 3:05 am | Reply
Myanmar Sniper Man >>>>>> အစ္စလာမ် ကိုတရိစ္ဆာန် ၀ါဒလို့လာပြောနေတဲ့ တောင်းစားနေတဲ့ဂတုံးတွေကော ၊ ခွေးမွတ်လို့ပြောနေတဲ့ စစ်ခွေး၊တွေကော ၊ စစ်ကြံဖွတ်တွေကော ကိုယ့်ဘုရားသမိုင်းကို ကိုယ်ပြန်လေ့လာကြည့်လိုက်..မင်းတို့ဘုရားစာတွေကော ၊ပရိတ်တွေကော ပလိပ်တွေကော
ပြန်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်ဦး…..ဒေါင်းမင်းတို့ ၊ ငုံးမင်းတို့ ၊ နဂါးမင်းတို့ ၊ ငရံ့မင်းတို့….
ဟက်ဟက်ဟက်…..ဘယ်သူတွေက တရိစ္ဆာန် ၀ါဒလဲ…ဘယ်သူတွေက တရိစ္ဆာန် သာသနာလဲ
ခြင်္သေ့ နှစ်ကောင် ..ဟက်ဟက်
စေတန် များ ၏ လင်္ကာ များ
ဘုရားရှင်တောင် အလောင်းတော် ဘဝ မှာ အမျိုးဘာသာ အတွက် လူသတ်ခဲ့တာပဲ။ ငါတို့ လည်း သတ်လို့ ရတယ်။
”ဒါဆိုရင် လည်း ပါဏာတိပါတ ကံ ဆိုတာကို လူကြားကောင်းအောင် ထည့်မနေနဲ့ လေ ”
လူ့ အခွင့်အရေး ဆိုတာ ဥပဒေ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်လိုက်နာစရာမလိုဘူး ။ ”ဘာသာတရားတိုင်းဟာ လူ့ အခွင့်အရေး ဝါဒပေါ်မှာအေ့ခြတည်ပြီး တည်ဆောက်ကြတာပါ။ြ ပင်းထန်လွန်းတဲ့ ဂျူး တွေရဲ့ ဇီယွန်ဝါဒ တောင်မှ လူသားတိုင်းအပေါ် တရားမျှတမှု ပေးထားပါတယ်။’ ‘
”ဒါဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ မိမိ နဲ့ အယူဝါဒ မတူတဲ့လူသားတွေအပေါ် လူသတ် မုဒိမ်းကျင့် လုယက် တာတွေ တရားဝင် လုပ်ခွင့်ပေး ထားပါသလား”
တိရိစ္ဆာန် ဂျီဟတ်ဝါဒ ဆန့် ကျင်ကြ။သားဖောက် သာသနာပြု တိရိစ္ဆာန် အစ္စလာမ်ဝါဒ ဆန့် ကျင်ကြ။
” ဂျီဟတ် ဝါဒဆိုတာ မင်းတို့ လို လူမဆန် တဲ့တိရိစ္ဆာန် တွေကို တုန့် ပြန်ဖို့ ငါတို့ မြင့်မြတ်တဲ့ သာသနာ က တရားဝင် ခွင့်ပြုပေးထားတာ။” မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေလို မုဒိမ်းကျင့် ။လူမျိုးတုန်း သတ်။ အကွက်ချ ပြီး တခြားဘာသာ ဝင်တွေကို ယူပြီး မိစ္ဆာဘာသာထဲ ဇွတ်သွင်း လုပ်တာထက်စာရင် သားဖောက် သာသနာပြုတာ တော်သေးတယ်”
ကုလားတွေ ဗလီက အော်နေတာ ဟာ ငါတို့ နားမလည်အောင် ကျိန်စာ တိုက်ပြီးအော်နေတာ။
” မင်းတို့ လို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ လော က်ကမှ သာကီ ကုလား က ဆင်းသက်လာတဲ့ ကုလားယုတ် အမျိုးကို ကျိန်စာ တိုက်စရာလိုလို့ လား။ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုးံ။မတရားမှုအကျူးလွ န်ဆုးံ နိုင်ငံ လူမျိုး က သူ့ ဟာသူ ပျက်ဆီးနေတာကို ‘ ‘
ဧည့်သည် က ဧည့်သည် လို နေရမယ်။ အိမ်ရှင် နဲ့ အဆင်ပြေ အောင် နေရမယ်။
” ဘယ်သူက အိမ်ရှင် လဲ။ လူဦးရေ များတဲ့ ဘာသာ လူမျိုး က အလိုလို အိမ်ရှင်ဖြစ်သွားရောလား။အာဏာယူထားတဲ့ လူမျိုး က အိမ်ရှင်လား”ထပ်ပြောရရင် ဒိ့ထက် ရင့်သီးပြီး ခွဲခြားတဲ့ စကား မရှိဘူး” ဘုန်းကြီး မပြောနဲ့ ။သာမန် လူတယောက်ပြောရင်တောင် လက်ခံပေး လို့ မဖြစ်တဲ့ စကား”
ဒါတွေဟာ ဘုရားသားတော် တွေ ပြောတဲ့ ရွံ့ ရှာစက်ဆုပ်ဖွယ် စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသားတော် တွေရဲ့ စကားဟာ ဘုရားကို ကိုယ်စား ပြုနေပါတယ်။ပြောရရင် ရှင်ဂေါတမ ပြောတယ် လို့ ယူဆလို့ ရတယ်။ပြန်အဖတ်ဆယ်ဖို့ တောင် မဖြစ်နိုင် တော့တဲ့ အခြေအနေတခုကို ရောက်သွားပါ ပြီ။ဟန်လုပ်ပြီး အဖတ်ဆယ်လည်း ဘယ်သူမှ အယုံအကြည်မရှိတော့ပါဘူး။
November 16, 2013 at 4:34 am | Reply
Ko Ko Gyi Where is WIRATHU? Where are 969 ultra-nationalists? Where are the military-cyber-troopers who wish to use their bones to buildafence at the Western border. R they all at the North-Eastern border raising their cloths to show their buttocks inviting the Rich Invaders?
David Law The Anti-OIC demonstrations are being made to divert the people’s attention from Leppadaung. The regime does not know how to solve the Leppadaung Problem, so each time Leppadaung Problem arises, they make some kind of anti-Muslim campaign. …………………………………………………………………Remember when we were young, the regime would blame everything that went wrong in Burma on the British? Well, now, sanctions are being lifted and the regime is expecting help from UK and US, so they cannot blame the white men any more. So they needanew scapegoat to blame, and they have chosen the Muslims. It is tragic and unjust, but this is the answer when you analyze the situation.
Aung Tin လက်ပန်တောင်းကို လူလည်လူနပ်တွေ မလာဘူး။ လူမိုက်တွေသာ သွားကြတာပါကွယ်။